SingForYou.net - Toe Toe Tate Tate
Toe Toe Tate Tate
By : BaNyarOo on Feb 28, 2010
Score: 60 Rating: 5.00 Comments: 23
Toe Toe Tate Tate's Description
ဗညားဦးရဲ့ ပထမဦးဆုံး စုံတွဲသီချင်းပါ .. သူငယ်ချင်းတယောက် ပါဝင် ကူညီ သီဆိုပေးထားပါတယ် ... အားပေးကြပါဦးနော် ... :):):)
sunglove3 on Oct 23, 2010 0
a yan kite tal this song....nice singing..
MAYTHINGYAN on Jul 8, 2010 0
Very v.nice par . ************. Well done par.
Rosies on Mar 14, 2010 0
paradise on Mar 3, 2010 0
တိုးတိုးတိတ်တိတ် နဲ. တိုးကြိတ် သီဆိုလိုက်ရလို. ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ...:D Even your first try duet...That was great entertaining ....ဆိုထားတာ အရမ်းကောင်းကြတယ် နှစ်ယောက်လုံး....Try more duet both of you....မိုက်ကိုတော. လုဆိုပါ....စတားကို တော. လုမယူနဲ.နော်.....:P All starsssssss for both of you......
BaNyarOo on Mar 9, 2010 0
ဟုတ်ကဲ့ အားပေးမဲ့လူ ရှိလို့ကတော့ ဗညားဦးတို့က ဆိုပြီးသားပဲ ဟဲဟဲ။ မင်းသမီး နားထောင် အားပေးတာ ကျေးဇူးပါဗျာ ..... :)))))
KoBurma on Mar 1, 2010 0
______________________+88__________________________________ _______________88***8_+880___88*88__________________________ __________8***********++880*********888______________________ _____888*********8****++880_888********888888________________ _88*****8*****88_____8.+880_..._____888********8888____________ ____88*******88_______+8880________88**********88_________ ______8888*********888.++880..888************888____________ _________888**********.++888*****+++88****88______________ ____________888*******.++8888***+++8880++88______________ ________________8888888.+++8888+++8880++8888_____________ ________________________++888++8888+++888888++8888______________________ ___ရှုး_တိုးတိုး_____________++88++8888++8888888++888888_____ ________________________++++++888888888888888888_+88____ _________________________++++++88888888888888888_++8_____________________ _နားထောင်လို_့အရမ်းကောင်းဒယ်_++++++++000888888888888+88_____ __________________________+++++++000088888888888_88_______________________ _အရမ်းတော်တယ်______________+++++++00088888888888_________ ____________________________+++++++088888888888______________________________ _၅စတားစ်_____________________+++++++088888888888__________ _____________________________+++++++8888888888___________ _From_KoBurma________________+++++++0088888888___________ _____________________________++++++0088888888____________ _____________________________++++++00888888l______________ .....အရမ်းကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ....လန်ထွက်နေတာပဲ :P:):D တီးလုံးသံ အရမ်းစူးပြီး ဆူနေတယ် ... ဒီသီချင်း ဆိုတဲ့လူ အကုန်လုံးပဲ ... ခေါင်းစဉ်က တိုးတိုးတိတ်တိတ်မို့ဆူဆူညံ တီးလုံးသံဖြစ်နေတာ .... :P:):D
BaNyarOo on Mar 1, 2010 0
တစ်ယောက်ကို နားကြပ် တစ်ဖက်နဲ့ နားထောင်ပြီး လုဆိုနေရလို့လေ .. ဟဲဟဲ။ တီလုံးသံ ဆူသလို စူးသလို ဖြစ်သွားတာပေါ့ .....။ ကောင်းသင့်သလောက် မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာ .. ဟိဟိ။ ကိုယ့်ဟာကို မြှောက်ပြောတာ ..... :)))))
mahuyar on Mar 1, 2010 0
:clap :clap :clap very good song and singers.ayan kg tal byoooooooooo. :clapayin lote pi ma ***** pay kae tal naw ,,,, :D next song tway ko lal sing par oo sone twal song tway lay :clap :clap :clap
ဟုတ် မြှောက်ပေးတဲ့ လူရှိရင်တော့ ဆိုပြီးသားပဲ ဟဲဟဲ။ ... နားထောင် အားပေး သွားတာ ကျေးဇူး တင်ပါတယ် ခင်ဗျားးးးးး
whitekisslay on Mar 1, 2010 0
Ayan kaung te duet song lay par pal Bro&sis yay....naut lae so par ohn nor..***************starzz for both of u:)
ရိုးရိုးကောင်းရင် တော်ပါပီ .. အရမ်းတော့ မကောင်းပါနဲ့။ အားပေးတာ ကျေးဇူးနော် ... :):):(:(:
susannyunn on Mar 1, 2010 0
wow ... mite hla che lar way.. duet lay tay mar g sho par own nawt.........bro kaw sis kawatwet.million starz par chint....>>>>>>>>
Thz Lol ... :)
susu23 on Feb 28, 2010 0
BaNyarOo yay de ta kar duet par lar.......2 youte lone so htar tar taw 2kg tal byo......arr pay twar tal nor *********4u2........
BaNyarOo on Feb 28, 2010 0
ဟုတ် ... စုံတွဲ စမ်းဆိုကြည့်တာပါ ဟဲဟဲ။ သူတို့လောက်တော့ မအော်နိုင်ဘူးပေါ့ .... :))((:
turikimuriki on Feb 28, 2010 0
wow... really nice duet par shint ... enjoy it ... sing more duet ... 5*4both of u :)
တကယ်ပြောတာလားဟင် ... သိပ်မမြှောက်နဲ့နော် ... လူက မြောက်ချင်နေတာ ... ဟဲဟဲ။
hippo on Feb 28, 2010 0
အားပေးနားဆင်သွားပါတယ်ရှင် ... ***** for both of you ...
အားပေးတာ ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ် ခင်ဗျား ... နောက်လဲ အားပေးပါဦး ... :P
mayangel on Feb 28, 2010 0
nice duet lay par ******************
တယောက်တမျိုး ဆိုထားသလိုဘဲနော် ... အတတ်နိုင်ဆုံး ညှိဆိုထားပါတယ် ... :)
zool111 on Feb 28, 2010 0
ဟုတ် ကျေးဇူးပါ ... :)
Feedback : 22